Ku Dhawaad 9 Askari Oo Boolis Oo Lagu Dhaawacay Ka Hor Iyo Kadib Ciyaartii PSG Iyo Marseille
HomeWararka CiyaarahaKu Dhawaad 9 Askari oo Boolis oo lagu Dhaawacay Ka hor iyo kadib Ciyaartii PSG iyo Marseille
October 25, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France 0
Ilaa 9 askari oo booliis ah ayaa la sheegay in la dhaawacay 21 qofna waa la xiray ka hor, intii lagu jiray iyo ka dib Le Classique ee ciyaarta u dhaxaysay Marseille iyo Paris Saint-Germain ee ka dhacday Stade Velodrome habeenkii Axadda.
Sideed ka mid ah askarta bilayska ayaa nabarro ka soo gaaray, halka mid ka mid ah askarta uu dhagax wejiga kaga dhacay, waxaana uu isbitaalka joogi doonaa ugu yaraan toddobo maalmood.
Sida laga soo xigtay Le Parisien, 21 qof ayaa lagu xiray ciyaarta, kadib rabashado halkaasi ka dhacay
Bambaanooyin aad u badan oo qiiq ah ayaa la dhigay, iyadoo ciyaarta la joojiyay, sababtoo ah walxaha qaar ayaa gaaray garoonka qeybta calanka halkaasoo Neymar uu doonayey inuu koorno kasii qaado.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay, taageere ayaa soo galay garoonka, wuxuuna u cararay dhanka Lionel Messi, iyadoo bannaanka garoonka ay boqolaal dadweyne ah isku dayeen inay galaan markii albaabada la xiray. Booliisku waxay ku qasbanaadeen inay soo dhexgalaan oo ay gaaska dadka ka ilmeysiiyaan qaar ka mid ah taageerayaasha ku ridaan.